Izilwane ezifuywayo ezinobungane, ichibi le-spa elishisayo; ukuhamba ibanga edolobheni - I-Airbnb
Izilwane ezifuywayo ezinobungane, ichibi le-spa elishisayo; ukuhamba ibanga edolobheni
Ikamelo ibungazwe ngu-David & Villy
U-David & Villy Ungumbungazi ovelele
Iminyaka engu-100 ubudala ye-villa, etholakala emizuzwini embalwa nje yokuhamba edolobheni, izindawo zokudlela, amakilabhu, imnyuziyamu, ipaki ... I-villa yayiye ekushintsheni kwesimanjemanje kakhulu. Ingadi enhle ye-Rose nendawo enkulu yenja yakho
Ikamelo lakho linombhede omkhulu ontofontofo kakhulu,i-Smart TV ene-Netflix, i-UTube, i-TV ngokwesidingo, I-WI-FI esheshayo engenamkhawulo, i-spa pool ku-39c unyaka wonke. Umpheme omuhle wokuhlala futhi ujabulele ilanga- alinayo indawo yokupheka izivakashi ezingayisebenzisa, futhi unganikezi isidlo sasekuseni, kodwa ikhofi elihle elihlanzekile, itiye namanzi okuhlunga. Ipaki eliphephile lemoto. Izinja ziziphatha kahle zamukelekile. funda kancane
Sinamakamelo angu-2 atholakalayo e-Fr, Sat, Sun emndenini nabangane uma bethanda ukuhlala ndawonye - umbhede omkhulu, i-Smart TV ekamelweni ngalinye, ikhofi, itiye lamanzi ahlungiwe. Intengo izofana nelinye ikamelo. Ayikho imali eyengeziwe yezilwane ezifuywayo.
Ngethemba ukuthi uthanda ngempela
Ibungazwe ngu-David & Villy
Sithanda ukuzijabulisa nezivakashi.
UDavid & Villy Ungumbungazi ovelele